SHEEKO IYO SHACTARO: Maadeeye iyo Warmoog W/Q Bashiir Cali Barre | Laashin iyo Hal-abuur
SHEEKO IYO SHACTARO: Maadeeye iyo Warmoog W/Q Bashiir Cali Barre
SHEEKO IYO SHACTARO, Maadeeye iyo Warmoog”
Warmoog waa gabar aad u qurux iyo qaayo badan, waxaana eebbe ku galladaystay dabeecad dulqaad iyo dadnimo aad u heersarreysa.
Warmoog waxay is barteen wiil ka mid ah dhallinyarada ay isku magaalada deganyihiin oo magaciisa ay ka sarreyso naynaastiisu, waxaana lagu naynaasaa “MAADEEYE”.
Sida naynaastiisaba ka muuqata waa nin aad u shactaro iyo maaweelo badan hal abuurnimana ku darsaday oo waa afmaal farta ka xiran, goobta iyo gollaha uu yimaadna afkiisuun baa la dhawraa, dadkoo dhami waa tixgeliyaan, waa nin bulshaawi ah oo codkara, hase yeeshee Maadeeye, waa nin dhallinyaro ah oo aan hanti lahayn, shaqona hayn oo fara madhan, ciladaas oo Maadeeye u diiday inuu wax badan u hirgalaan. Haddana waa nin isku kalsoon oo hayn la’aantaasi kama dhigin qof wax ka dhiman yihiin, ee si buu u dhiirranyahay oo maahan shaqsi isku dhiibay sida uu wax la’yahay.
Maalmo ka dib isbarashadoodii, ayuu isku dayay inuu xodxoto warmoog, dalabkiisa iyo doonistiisa ayuu farta ka saaray gabadhii warmoog ahayd asagoo wax baqdin ah aysan ka muuqan iyo filasho xumo toona.
Warmoog oo maalmihii koobnaa ee ay taqiinay aad u xansatay xaaladda dhabta ah ee Maadeeye soona oggaatey inuu yahay nin jeeb maran, ayaa dalabkiisa ka biyo diidday waxyaalo aan jirinna u sheegsheegtay sida si ay u qanciso maadaama ay u aragtey ineysan ka helayn waxay rabto maaha dhanka qofnimadee xagga dhaqaalaha, waxay billowdey inay cudurdaaro badan u sheegto.
Ninbaan u doonanahay, mid dhalashada Jarmalka qaatay ayaan saaxiibo isku dheer nahay, mid kaloo eeddo dhashay ayaa reerku isiin rabaan iyo qaarkale oo dhammaantood is wada burinaaya.
Maadeeye waxaa u caddaatay in gabadhu is dhaafis wado, ee aysan wax saxan lasoo shirtegin, markaa ayuu si cad u yiri ”Naa heedhe hadba dhan ha u dilaamin oo darbi haysku qaadine, wax isku aadan ii sheeg ama ugu yaraan ii sheeg waxaad igu diidayso oo gaar ah haddii ay jiraan”.
Warmoog oo markaan jaha kale oo u furan arki la’ ayaa bareereheeda caddaysatay tirina ”Maadeeyoow haddaan hadda ku qaabilo, ma tahay nin is meel marin kara oo leh awood iyo dhaqaale uu reer ku dhidbo”?.
Alleylehe hadda ayuu maadeeye ogaaday halka sartu ka quruntay, oo ah in gabadhu xogtiisa dusha ka hayso waxa ay la dig iyo dam leedahayna ay tahay saluug ay ka qabto jeeb marnaantiisa, waa nin aan suugaantu dhibin kuna darsaday qaab shactaro ah u xareedinta suugaanta.
Maadeeye asagoo doonaya inuu warmoog dareensiiyo in jacaylka iyo reer wada unkiddu aysan jeebka ku xirnay, ee shardiga kaliya ee loo baahanyahay uu yahay in israbis iyo isku kalsoonaan ay jirto, kuna sii daraya tusaalaha ay ku wada noolaan karaan haddii ay aqbasho ayuu ku maasooday sidatan:-
Middi seedo goysiyo
Yaa masaaro kuu gada
Kuyiraa war moogeey
muska soo galee nagi
madaxa uga soo goo
macashooda noo kari
aan maraqa koodaa
mayrax jeerin iyo labi
maxabba ugu dhuuqno
masaariif ka dhiganee.
hadaa maya tiraahdee
magaalaan degaa iyo
kama maarmi karayiyo
muraniyo dhib keentana.
Sida awr madoobaan
qabir kuu miq siinoo
Isku mari lugaha oo
Miig baaban kuu xiri.
Adoon iba mucaaradin
maya mayana igu oran
haddaad milicda suudiga
maska iyo abeeska ah
maasheed ku qanacdoo
karar aan midnaba celin
meel nooga xaartoo
miyir iigu joogtana.
Dadku wada mashraxado
Miisaan leh baan curin
Murti waxaan ku dhihi laa
marwo qaaliyaa tahay
malyan dumara tii aan
marxababa ka iriyeen
kaga maarmay baa tahay
maja dhooqo kugu iri
marraa waaxid waa qalad
Maal iyo adduuniyo
Waxba moodku maahe
Maadeeye baa mudan
Adna muran la’aan yeel.
W/Q Bashiir Cali Barre